Articles tagged 'world economic forum'
Plan to embarrass ED in Switzerland 19 January 2019 HARARE - Pressure is mounting on President Emmerson Mnangagwa regarding his planned trip to the World Economic Forum (Wef)'s annual meeting in Davos, Switzerland, next week — amid Zimbabwe's worsening political crisis, the Daily News can report. This comes as plans are afoot by Mnangagwa's see...
Zim slips in Wef's rankings 19 October 2018 HARARE - The US remains the world's most competitive economy, whilst Zimbabwe has fallen from 124th to the 128th, according to the World Economic Forum (Wef)'s annual rankings issued this week. The Wef said Zimbabwe slipped in the ranking due to worsening infrastructure, a weakening of the cou...
Zim faces fiscal crisis: WEF 19 January 2016 HARARE - Zimbabwe risks plunging into a fiscal crisis this year due to governance failure, The World Economic Forum (Wef) has warned. “Given the public service situation that the country is faced with and its failure to meet the International Monetary Fund (IMF) prescription to drastically cut...
'Commodities slump to continue in 2016' 4 January 2016 HARARE - Zimbabwean mining companies must brace for a further plummet in commodity prices on the international market this year, a World Economic Forum (Wef) report has said. According to the report, released last week commodity prices for everything, from crude oil to industrial metals such a...
Moxon's Meikles grabs global award 12 September 2015 HARARE - Zimbabwe Stock Exchange listed diversified conglomerate, Meikles Limited (Meikles) has been ranked among top African companies by the World Economic Forum for its sterling contribution in the country. Meikles, a large conglomerate in Zimbabwe with over 100 years of history, is one of ...
Policy uncertainty weighs down Zim 9 September 2014 HARARE - Zimbabwe's uncertain policy environment remains a concern despite the country improving in global competitiveness ratings, a latest World Economic Forum (Wef) said. In its Global Competitiveness Report for 2014-2015, the think-tank said the southern African nation’s policy environment...
Zim banks poorly ranked 10 September 2013 HARARE - Zimbabwean banks have been ranked among the worst financial institutions in the world due to low capitalisation levels and systemic risks inherent in the economy. According to the World Economic Forum (WEF)'s global competitiveness 2013 to 14 report released recently, the country was ...
Perception haunts Zim 8 September 2013 HARARE - Poor international perception of Zimbabwe's public institutions continues to weigh the country down, the World Economic Forum (WEF) has said. According to the latest WEF Global Competitiveness Report 2013–2014, public institutions continue to receive a weak assessment, particularly re...